Phyu Phyu Thin Sympathizer: 2009
0 comments at 4:00 AM Labels: General news
အောင်ထက်/ ၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၀၉ ခေတ်ပြိုင်
အိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီ ကူးစက်ခံရသူများအရေး ဆောင်ရွက်နေကြသည့် ရန်ကုန်မြို့အခြေစိုက် အန်ဂျီအိုများသည် တဖွဲ့နှင့်တဖွဲ့ ပွင့်လင်းရိုးသားစွာ အပြန်အလှန် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြပြီး ARV ဆေးများ ပိုမိုဖြန့်ဖြူးနိုင်စေရန် ဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်း အိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီ/အေအိုင်ဒီအက်စ် ဝေဒနာရှင်များကို ကူညီစောင့်ရှောက်နေသူ မဖြူဖြူသင်းက ပြောသည်။
“3D Fund အနေနဲ့ အန်ဂျီအိုတွေကို ပံ့ပိုးနေတာ ဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ မသိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် AZG သဇင်ဆေးခန်းတွေကို ARV ချပေးတာ (၂) လလောက်ပဲ ရှိပါသေးတယ်။ ဒါကလည်း အကန့်အသတ်နဲ့မို့ လူနာတွေအတွက် ထိရောက်မှု အားနည်းနေပါသေးတယ်” ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
ဗြိတိန်၊ သြစတြေးလျ ဦးဆောင် အန်ဂျီအိုတခုဖြစ်သည့် 3D Fund သည် မြန်မာပြည်အခြေစိုက် အန်ဂျီအိုများ၊ AZG ကဲ့သို့ သာကေတ (သဇင်)၊ လှိုင်သာယာ (သဇင်)၊ အင်းစိန် (သဇင်) ဆေးခန်းများသို့ ယခုလပိုင်းများအတွင်း ARV ဆေးဝါးများ ထောက်ပံ့လျက်ရှိသည်။
လက်ရှိအခြေအနေတွင် သာကေတ (သဇင်) ဆေးခန်းရှေ့၌ ARV ဆေးဝါးရရှိရေးအတွက် ကြိုတင်စာရင်းပေးသွင်းရန် စောင့်ဆိုင်းနေသော ဝေဒနာရှင်တို့မှာ နံနက် (၅) နာရီခန့်ကတည်းက ရောက်ရှိနေကြကာ နံနက် (၈) နာရီ ဆေးခန်းဖွင့်သည်နှင့် စုပြုံတိုးဝှေ့ပြီး ARV စာရင်းဝင်ရန် နေ့စဉ် ကြိုးစားနေရသည်ဟု အိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီ ဝေဒနာရှင်များက ပြောသည်။
လာရောက်တန်းစီနေကြသော ဝေဒနာရှင်အများစုမှာ ရန်ကုန်မြို့ရှိ ရတနာ့မေတ္တာ၊ ပဲခူးမြို့ရှိ မာရီစတုတ် အင်တာနေရှင်နယ်၊ ဖျာပုံမြို့ရှိ SEG ကဲ့သို့ အန်ဂျီအိုများနှင့် ဆေးဝါးရယူရာတွင် အဆင်မပြေ၍ ယခုကဲ့သို့ ရောက်ရှိလာကြသူများဖြစ်သည်။
“အေအိုင်ဒီအက်စ်လူနာ ဘယ်လောက်များများ တနေ့မှ (၁၀) ယောက်ပဲ စာရင်းသွင်းနိုင်တယ်။ တခါတရံ ဆရာဝန်နည်းတဲ့ ရက်ဆို (၅) ယောက် (၆) ယောက်ပဲ စာရင်းဝင်တယ်” ဟု တာဝန်ကျ သူနာပြုတဦးက ပြောသည်။
ARV စာရင်းဝင်ပါက ဆေးစမ်းပြီး တလအတွင်း ARV ဆေး ရာသက်ပန်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
အင်းစိန် (သဇင်) ဆေးခန်း၌ ဒီဇင်ဘာလကုန်အထိ လူနာစာရင်းပြည့်နေပြီး လှိုင်သာယာ (သဇင်) နှင့် သာကေတ (သဇင်) ဆေးခန်းတို့၌ ဆေးဝါးကိုယ်တာ အနည်းငယ် ကျန်ရှိနေသေးသည်ဟု သိရသည်။
အဆိုပါ အခြေအနေကြောင့် အိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီ/အေအိုင်ဒီအက်စ် ဝေဒနာရှင်တို့သည် အစိုးရအသိအမှတ်ပြု သဇင်ဆေးခန်းများ၌ ARV ရရှိနိုး၊ အန်ဂျီအိုများထံမှ ARV ရရှိနိုး စမ်းတ၀ါးဝါးဖြင့် အခက်အခဲမျိုးစုံကို ရင်ဆိုင်နေရသည်။
“အန်ဂျီအို အတော်များများဟာ လူနာတွေကို အတင်းကာရော Collect သာ လုပ်နေကြတယ်။ ARV ဆေးကို အလျဉ်မီအောင် ပေးနိုင်တာ မဟုတ်ဘူး။ သူတို့ကိုယ်တိုင် အလုံးစုံ အထောက်အပံ့ မပေးနိုင်ဘဲ လူနာတွေကို ဘယ်ကို မသွားရ၊ ဘယ်သူနဲ့ မဆက်သွယ်ရနဲ့ ချုပ်ကိုင်ထားကြတယ်။ ဒီတော့ ARV နဲ့ သက်တမ်းထိန်းနေရတဲ့ လူနာတွေဟာ စိတ်ဓာတ် တစစပျက်ယွင်းလာပြီး တဖြုတ်ဖြုတ်သေနေတယ်” ဟု မဖြူဖြူသင်းက ပြောသည်။
ရန်ကုန်မြို့၌ အိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီ ဝေဘာဂီ ကူးစက်ဆေးရုံ၊ မင်္ဂလာဒုံ ကူးစက်ဆေးရုံတို့ရှိပြီး တနေ့လျှင် ပျမ်းမျှ လူနာ (၅၀) ခန့် သေဆုံးလျက်ရှိကြောင်း၊ ဆေးရုံဆေးခန်းမရောက်ဘဲ လူမသိ သူမသိ အသေခံနေသူတို့နှင့်ဆိုလျှင် တနိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာအရ နေ့စဉ် လူနာ ထောင်ချီ သေဆုံးဖွယ်ရှိသည်ဟု ပြည်တွင်းမှ အထူးကုဆရာဝန်ကြီးတဦးက သုံးသပ်သည်။
0 comments at 3:04 AM Labels: phyu phyu thin's writing in Eng
0 comments at 6:22 PM Labels: General news
0 comments at 5:17 PM Labels: Interview
Tuesday, 01 December 2009 19:04 ဧရာဝတီ အင်တာဗျူး
0 comments at 3:40 AM Labels: General news
01 December 2009 VOA
0 comments at 10:44 PM Labels: phyu phyu thin's writing
0 comments at 5:47 PM Labels: phyu phyu thin's writing
ဒီနှစ်ထဲမှာ ဆူဒန်နိုင်ငံသမ္မတ မစ္စတာ အိုမာက ခုခံအားကျရောဂါ တိုက်ဖျက်ရေး ကူညီနေတဲ့ NGO များ အပါ အ၀င် NGO ၁၃ ခုကို နိုင်ငံကနေ နှင်ထုတ်လိုက်တဲ့ သတင်းကြောင့် ကျမ အများကြီး အံ့သြ တုန်လှုပ်သွားပါ တယ်။
NGO တွေ ဆူဒန်နိုင်ငံရေးမှာ ၀င်ရှုပ်တယ် ဆိုတဲ့ သူ့စွပ်စွဲချက်တွေ ဘယ်လောက် ခိုင်လုံတယ် ဆိုတာတော့ ကျမ မသိနိုင်ပါဘူး။ ဆေးသောက်လက်စ လူနာတွေ ဘယ်လောက်များ ဒုက္ခ ရောက်သွားသလဲ ဆိုတာကို စဉ်းစား နေမိတာပါ။
NGO တွေက ကျမတို့ နိုင်ငံမှာလည်း ရှိပါတယ်။ စစ်အစိုးရကလည်း NGO တွေကို အကန့်အသတ်နဲ့ လုပ်ကိုင်ခွင့် ပြုထားပါတယ်။ ၂၀၀၈ မေလ နာဂစ်မုန်တိုင်း တိုက်ခတ်ပြီးချိန်မှာတော့ ပြည်တွင်း NGO၊ တနည်း ပြောရရင် ခါတော်မီ NGO တွေ မှိုလို ပေါက်လာပါတယ်။ မှိုလိုပေါက်တယ် ဆိုတဲ့ အသုံးနှုန်းကို တချို့ကတော့ ကြိုက်မယ် မထင်ဘူး။ ဒီတိုင်းပြည် လူဦးရေ ၅၆ သန်းကျော်အတွက် ဒီ NGO လေးတွေပဲ ရှိတာ မှိုလိုပေါက်တယ်လို့ ပြောရမလား ဆိုပြီး အပြစ် မြင်နိုင်ပါတယ်။
မှိုလိုပေါက်နေတယ် ဆိုတဲ့ စကား မမှားဘူးလို့ဘဲ ပြောရပါမယ်။ သူတို့တွေဟာ တကယ့် လိုအပ်ချက်ကို မဖြည့်နိုင်လို့ ဒီစကား ပြောရတာပါ။ သူတို့ဟာ ဝေးလံ သီခေါင်တဲ့ နေရာတွေကို မသွားနိုင်ပါဘူး။ သွားလို့ မရတာလည်း အကြောင်းအချက် တခု ဖြစ်မယ်လို့ ကျမ စဉ်းစားမိပါတယ်။ ရန်ကုန်မြို့မှာတော့ NGO တွေ များတယ် ဆိုရမှာပါ။
စဉ်းစားမိတဲ့ နောက်တချက်က အလှူရှင်နဲ့ လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်သူတွေကြား နားလည်မှုပါပဲ။
အလှူငွေတွေဟာ 3D Fund လို့ ခေါ်တဲ့ တီဘီ၊ ငှက်ဖျား၊ ခုခံအားကျ ရောဂါ တိုက်ဖျက်ရေး အတွက် ကူညီတဲ့ နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့ဆီက လာပါတယ်။
3D Fund အဖွဲ့ကြီးဟာ ရောဂါ သုံးမျိုးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံကို ၅ နှစ်ထောက်ပံ့မယ့် အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလို ထောက်ပံ့ဖို့အတွက် စုစုပေါင်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၁၀၀ သုံးစွဲဖို့ရာထားပါတယ်။ ဒီနှစ်အတွက် ဒေါ်လာ ၆ သိန်း ၃သောင်း သုံးစွဲမယ်လို့လည်း အဖွဲ့အစီရင်ခံစာမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
အဲဒီ 3D Fund က မြန်မာနိုင်ငံကို မူဝါဒ အမှားကြီးနဲ့ ၀င်လာတာကြောင့် ဒေသခံ NGO တွေ ပွားများ လာစေတာပါ။ သူတို့ မူဝါဒ အမှားကြီးက ကျမတို့ နိုင်ငံက ဒေသခံ NGO တွေကို ပျက်စီးစေတဲ့ လမ်းကြောင်း ဘက်ဆီ တွန်းပို့သလို ဖြစ်နေတာပါ။ 3D Fund ကို ကျမ မြင်တာကတော့ ဒီအတိုင်းပါပဲ။
သူတို့ရဲ့ ယေဘုယျမူကတော့ သူတို့ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ အကူအညီ မပေးနိုင်ဘူး။ ဒါပေမယ့် ကြားခံ တခု ထားပြီးတော့ ပေးမယ်။ ပေးမယ့် နေရာမှာလည်း အားလုံးကို ပေးမယ်၊ ကျမတို့လိုမျိုး နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းက လွဲလို့ပေါ့။ ဒါ ကျမတို့ကို မပေးလို့ ဝေဖန်နေတာလည်း မဟုတ်ဘူး။ ကျမတို့ အနေထားက သူတို့ ပေးမယ် ဆိုရင်တောင် လက်မခံနိုင်တဲ့ အခြေအနေပါ။
အာဏာပိုင်တွေနဲ့ NGO တွေရဲ့ သဘောတူညီချက်တွေ အရ နိုင်ငံရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အဖွဲ့တွေ၊ အစိုးရနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အဖွဲ့တွေကို သူတို့ ကူညီလို့ မရဘူး။ ဒါပေမယ့် အငြင်းပွားစရာ ဖြစ်နေတဲ့ ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်း၊ မိခင်နဲ့ကလေး စောင့်ရှောက်ရေး အသင်းလိုမျိုးတွေကို ကူညီနေတာ တွေ့ရတယ်။
ဒီလို အကူအညီတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စောင့်ကြည့်မယ့်သူ ဘယ်သူဖြစ်မလဲ၊ စောင့်ကြည့်တာကိုရော ခံနိုင်သလား ဆိုတာ လေ့လာပြီးတော့မှ အကူအညီပေးသင့်တယ် ဆိုတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တခါတုန်းက ပြောခဲ့တဲ့ စကားဟာ အလွန်ကိုပဲ တန်ဖိုးရှိပါတယ်။
3D Fund က NGO တွေကို ထောက်ပံ့တယ်။ ငွေသာ ၀င်သွားတယ် NGO တွေက ဘာတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတာ ပြည်သူလူထု မသိလိုက်ကြဘူး။ ထိရောက်မှု ဘယ်လောက် ရှိတယ်ဆိုတာ မေးခွန်းထုတ်စရာ ဖြစ်နေပါတယ်။
3D Fund က တကယ် ထိထိရောက်ရောက် လုပ်နေသူတွေနဲ့ လက်တွဲမှ အောင်မြင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လုပ်နေတဲ့ အဖွဲ့တွေက အကူအညီ မရတာတွေ ရှိပါတယ်။
တဘက်မှာလည်း အာဏာပိုင်တွေက ထိန်းချုပ်မှု သိပ်များရင် ဒီငွေတွေက ထိရောက်မှာ မဟုတ်ဘူး။ HIV နဲ့ ပတ်သက်ပြီး တနိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာနဲ့ ထိထိရောက်ရောက် လုပ်မှ အောင်မြင်မှာပါ။ အာဏာပိုင်တွေက NGO တွေကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်။
3D Fund လိုပဲ အဲဒီ ရောဂါသုံးမျိုးအတွက် လှူဒါန်းနေတဲ့ နောက်ထပ် နိုင်ငံတကာ ရန်ပုံငွေ အဖွဲ့အစည်းကြီး တခုဖြစ်တဲ့ Global Fund ဆိုတဲ့အဖွဲ့ကြီးဆိုရင် စစ်အစိုးရက လွတ်လွတ်လပ်လပ် သွားလာလှုပ်ရှားခွင့်ကို ချုပ်ချယ် ကန့်သတ်ထားလို့ ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်နဲ့ ၂၀၀၅ ခုနှစ်က မြန်မာနိုင်ငံကနေ ထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။
မနေ့တနေ့ကတော့ အဲဒီ Global Fund အဖွဲ့ကြီးဟာ မြန်မာနိုင်ငံကို လာမယ့် တနှစ်အတွင်း အမေရိကန် ဒေါ်လာ သန်း ၁၁၀ ကူညီသွားမယ်ဆိုတဲ့သတင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ အခုလို လိုအပ်နေတဲ့ အကူအညီကို ပြန်ပေးတဲ့ အတွက် ကြိုဆိုရမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီအလှူတွေက တကယ် လိုအပ်နေတဲ့ သူတွေရဲ့ လက်ထဲကို ရောက်နိုင်တဲ့ အစီအစဉ်တွေလည်း သေသေချာချာ ရှိသင့်ပါတယ်။
လက်တွေ့ လိုအပ်ချက်ကို မပေးနိုင်ဘဲနဲ့ သူ မလိုအပ်တာ ပေးမိပြန်ရင်လည်း ပေးကားပေး၏ မရ ဆိုတာလိုမျိုး ဖြစ်မှာပါပဲ။
ဥပမာနဲ့ မြင်သာအောင် ပြောရရင် ကျမ လူနာတချို့ကို NGO တခုက လာခေါ်ပါတယ်။ စက်ချုပ် သင်တန်း ပေးမယ်လို့ ပြောပါတယ်။ အသက်မွေးမှု ပညာ တတ်မြောက်ထားရင် မဆိုးဘူး ဆိုပြီး သင်တန်း လွှတ်လိုက် ပါတယ်။ သင်တန်းလည်း ပြီးလာရော သူတို့ ပညာအနည်းငယ်တော့ တတ်လာပါပေရဲ့။ ဒါပေမယ့် လက်တွေ့ လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်ဖို့ စက်က ဘယ်မှာလဲ လို့ သင်တန်းပေးသူတွေကို မေးကြည့်တော့ “အဲဒါတော့ မတတ်နိုင် ဘူး၊ ဒီ စက်ချုပ် သင်တန်း ပေးတဲ့ စက်တွေတောင် ငှားထားရတာ” ဆိုတော့ ကျမလည်း သက်ပြင်းချရုံ မှတပါး မတတ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့။
ဒီသင်တန်းကို လူ ၃၅ ယောက် အတွက် ပေးတာပါ။ ကျမ စဉ်းစားမိတာက သင်တန်းကို ၅ ယောက်လောက် အတွက်ပဲ ပေး၊ ပြီးတာနဲ့ စက် ၅ လုံး ၀ယ်ပြီး ဆင်ပေးလိုက်ရင် မဖြစ်ဘူးလား ဆိုတာမျိုးပါ။ တကယ်ဆို လူ ဒီလောက်များများ ဘာလို့ သင်တန်းပေးသလဲ မေးရင် အလှူရှင် ဘက်ကနေ ကြည့်ကောင်းအောင် ပေးတယ် ဆိုတဲ့ အဖြေပဲ ထွက်ပါတယ်။ လူနည်းနေရင် ထောက်ပြ ပြောဆိုခံရမှာ စိုးရိမ်ပုံ ရပါတယ်။ ဒီတော့ သင်တန်းတခု ပေးလိုက်၊ ဒေသခံ NGO လေးတွေက ငွေသုံးလိုက်၊ လူနာတွေ တကယ် ထိရောက်မှု ရှိမရှိ ဆိုတာလိုမျိုး ဘယ်သူမှ မသိနိုင်တော့တဲ့ အနေအထားတွေ မြင်နေရပါတယ်။
တလောက HIV/AIDS ဆိုင်ရာ အကူညီပေးရေး ဆွေးနွေးပွဲကြီး တခုအတွက် ကျပ် သိန်း ၂၄၀ လောက် သုံးလိုက်တယ်တဲ့။ လုပ်ငန်း မစနိုင်သေးခင် ကုန်သွားတဲ့ ပိုက်ဆံပါ။ အရမ်းပဲ နှမြောမိပါတယ်။
ဆွေးနွေးပွဲကို ဟိုတယ်ကြီးမှာ လုပ်မယ့်အစား ဈေးသက်သာတဲ့ ခန်းမ တခုမှာ လုပ်လိုက်ပေါ့။ ဈေးကြီးတဲ့ အစားအစာတွေနဲ့ ဧည့်ခံမယ့်အစား ငွေကုန်ကြေးကျ သက်သာမယ့် လက်ဖက်ရည် တခွက်စီလောက် တိုက် လိုက်ပေါ့။ ဒါဆို ကုန်ကျစရိတ်က နည်းသွားပြီး လုပ်ငန်းစချိန်မှာ ဒါတွေထည့်သုံးရင် လူနာတွေအတွက် ပိုမို အကျိုးရှိမယ်လို့ တွေးမိနေတာမျိုးပါ။ နိုင်ငံတကာစံ ဆိုတာလည်း ဒီလောက်ကြီး အကုန်ကျခံပြီး လုပ်ပြမှ မဟုတ်လောက်ပါဘူး။
ဒါက ထင်သာမြင်သာရှိတဲ့ ကိစ္စရပ်ပါ။ မမြင်သာတာတွေလည်း ရှိပါတယ်။ လူနာတွေကတော့ ဘာမှ မသိသလို အလှူရှင်တွေလည်း ဘာမှ သိမယ် မထင်ပါဘူး။
ဒီလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နေတိုင်း ချီးမွမ်း ထောမနာပြု၊ သူရဲကောင်း တယောက်လို ဆက်ဆံနေတာဟာ မြန်မာပြည် မှာတော့ အတော့်ကို လွဲမှားနေတယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။ အလှူရှင်တွေလည်း သတိရှိရှိ ကူညီ ဆောင်ရွက်ပါလို့ ကျမ အလေးအနက်ထား သတိပေး ပြောဆိုလိုက်ရပါတယ်။ ။
comments and hits counting on Nov 23, 2009
Oneof the sutibable Point Of View
written by koyelay, November 23, 2009
In these days, we should ask this is question!!!!!!
Should learn more
written by Phoe Auu, November 23, 2009
Seems like author doesn't know well about the donors organizations and how they do it.
One thing for sure is that money doesn't come that easy from these international donors. They have well-crafted check and balance system and monitoring and evaluation systems for the recipient organizations to be accountable as much as possible. I agree with author about the fact that intended amount of these aids should reach the beneficiaries. But some points opinions in the article are not well-thought and professional.
written by MHM, November 22, 2009
မြန်မာတွေက ငါးပွက်ရာ ငါးစာချဖို့ လုပ်ကြတာ များတယ်။ အန်ဂျီအိုကို စစ်အစိုးရက သူ့အတွက် အသုံးချဖို့လောက်ပဲ ကြည့်နေတာပါ။ ပြည်တွင်း အန်ဂျီအို အတော်များများကလည်း အစိုးရနဲ့ ပလူးပလဲ လုပ်ပြီး၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း တခုလို ၀င်လုပ်နေကြတာလို့ပဲ မြင်ပါတယ်။ NGO Business ပေါ့။
written by Phoenix, November 21, 2009
ဒီလိုအဖြစ်မျိုးလည်း ရှိတယ်ပေါ့? ကျနော် အရင်က သေချာမသိဘူးဗျာ။ NGO တိုင်းက သူ့ Donor နဲ့သူ တကယ်ထိထိရောက်ရောက် လုပ်နေတယ်ပဲ ထင်ခဲ့မိတာ။ Fund တွေ အလဟသတ် ကုန်သွားတာ နှမြောဖို့ကောင်းတယ်ဗျာ။ ပြုပြင်သင့်ပါတယ်။
HIV & Burma
written by Mi Mi Linn, November 21, 2009
You are right. I am currently working in one of the LNGOs in Burma. Yes. we are spending too much money but we don not know what the results are. We need to produce more efforts. Of course, this military regime should be changed. With this regime, no efforts can be made. This is politics. Everything in Burma is related to politics. Love live Burma.
welcome to all INGOs
written by myo, November 21, 2009
We should welcome to all of INGOs because they are helping our people as much as they can.There may have some error in their management because they are led by foreigners and they don't know well about the country.Inernational donors trust to them only.They know the regulations how to get the funs from donors. "Welcome to all INGOs who helping our people".
ki ki's writing
0 comments at 10:19 PM Labels: portrait
ကိကိရဲ့ ဘလော့မှာ မဖြူဖြူသင်း အကြောင်း ရေးထားပါတယ်။
လိပ်စာက http://www.kiki-idiotlove.com/2009/07/blog-post_07.html ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီကို သွားလို့မရရင် http://moemaka.com/index.php?option=com_content&task=view&id=4456&Itemid=1 မှာလည်း တင်ထားပါတယ်။
အပြည့်အစုံ ဖတ်ဖို့ read more ကို နှိပ်ပါ။ read more ပျက်နေရင် ခေါင်းစဉ်ကို နှိပ်ပါ။
Posted by kiki Jul 7, 2009
ရောက်ခဲ့ ရပြန်ပြီပေါ့ ဇူလိုင်လ ၇ ရက်နေ့ ။
ဇူလိုင် လ မှာ မြန်မာနိုင်ငံတော် အတွက် သမိုင်းတွင် ရတဲ့ဝမ်းနည်းကြေကွဲ စရာ အဖြစ်အပျက် ဖြစ်ခဲ့ ရတဲ့ရက် နှစ်ရက် ရှိတာ အတိတ် မမေ့တတ်ကြသူများ မှတ်မိကြမယ်လို့ မျှော်လင့် ပါတယ် ။
နိူင်ငံ တခုရဲ့စစ်မှန်သော အစိုးရ ဆိုတာ မိမိတို့ တိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့ အသက် အိုးအိမ် ကို ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ပြီး နိုင်ငံသားတွေရဲ့စီးပွားရေး ၊ ပညာရေး ၊ ကျန်းမာရေး ၊ လူမှုရေး အစရှိသည်တို့ ကို အဆင်ပြေ ချောမွေ့ စေအောင်
လုပ်ဆောင်ပေးကြရ မှာ ဖြစ်တယ် ။ အကယ်၍ ဒီ အစိုးရ အနေဖြင့် ထို ကိစ္စ အဝဝ တို့ ကို ရာနှုန်းပြည့် မလုပ်ဆောင် ပေးနိုင်ပါက ကူညီလုပ်ဆောင်ပေးမည့် အဖွဲ့ အစည်း တို့ ၏ ကမ်းလှမ်းချက်များကို လက်ခံ ပြီး ပြည်သူ့ အကျိုးကို ရှေးရှု ဆောင်ရွက်ပေးသင့်ပါတယ် ။
ပြည်သူ့ အကျိုးကို လုံးဝ ဥပက္ခာ ပြုကာ မိမိတို့၏ ကိုယ်ကျိုးစီးပွားကိုသာ ရှေးရှု နေကြသော အစိုးရတို့မှာ မိမိတို့ အာဏာ တည်မြဲရေးအတွက် ကိုယ့်လူမျိုး ကိုယ့်ပြည်သားများကို မတရားတဲ့ အမိန့်အာဏာများဖြင့် ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ကြတာတွေကြောင့် ဒီလို အခြေအနေမျိုးမှာ အုပ်ချုပ်သူ နှင့်အုပ်ချုပ်ခံသူ လူတန်းစား ၂ ရပ်အကြား မှာ ပဋိပက္ခတ်များ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ ရတာ မထူးဆန်း လှပါဘူး ။
ဒါပေမဲ့ ထူးဆန်းတာ တချက်ကတော့ ဒီလို ဖိနှိပ်အုပ်ချုပ်ရုံမျှမကသေး ၊ နင်းပြားဘဝဖြင့် အတိဒုက္ခရောက်နေကြသူများအား လူသားချင်းစာနာစိတ် ကင်းမဲ့ စွာ လျှစ်လျှုပြုထားခြင်းအပြင် ၊ မေတ္တာစိတ် ၊ လူစိတ် အပြည့်ဖြင့် အိတ်စိုက် ကူညီ ပေးကြသူများ ကိုပါ ဖမ်းဆီး ချုပ်ချယ် နှိပ်ကွပ်ခြင်း ပြု ကြတာ ၊ ဘယ်လို ခံယူချက်မျိုးဖြင့် ပါလဲ ဟု အဖြေမရှိတဲ့ မေးခွန်း တခု ကို ထုတ်မိပါတယ် ။
ဒီနေ့ မှာ လွန်ခဲ့တဲ့၄၇ နှစ်က အဖြစ်အပျက်ကြောင့် မြန်မာပြည်ရဲ့သမိုင်းမှာ ဖျောက်ဖျက်လို့ မရတဲ့ အမည်းစက် စွန်းထင်းစေခဲ့တဲ့အာဏာရှင် စစ် အစိုးရ ရဲ့လူမဆန်တဲ့ လုပ်ရပ်တွေ များလှစွာ ထဲ မှ ခု ဒီဖက်ခေတ် က လတ်တလော အကြောင်း အရာလေး တခု ကို ဖေါ်ပြ ပေးလိုပါတယ်။
၇.၇.၁၉၆၂ မှာ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ ရတဲ့ ဥဒါန်းမကြေ အဖြစ်မှန်တွေကို ကြည့်လို ဖတ်လိုပါက ကိုလူထွေး နှင့် မသဒ္ဒါ တို့ ရဲ့ ဘလောဂ် များမှာ သွားရောက် ဖတ်ရှု နိူင်ပါတယ် နော် ။
AIDS ခေါ် ကိုယ်ခံနိုင်စွမ်းအားကျဆင်းမှုရောဂါ ကြီး ဟာ လွန်ခဲ့ သော ဆယ်စုနှစ် နှစ်ခုကျော်အချိန်မှ ၍ လူသားများကို ခြိမ်းခြောက်လျှက်ရှိတဲ့ ရောဂါဆိုးကြီး ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ နိူင်ငံ အသီးသီး၌ တာဝန် ရှိ ပြီး တာဝန်သိတတ်ကြသော အစိုးရ အဖွဲ့ အစည်း များမှ အင်တိုက်အားတိုက် ကာကွယ် တိုက်ဖျက်ရင်း ဝေဒနာ သည်များကို စောင့်ရှောက် ကုသပေးနေကြပါတယ် ။
မြန်မာတပြည်လုံးအတိုင်းအတာဖြင့် ပြောရလျှင် AIDS ရောဂါ ခံစားနေရသူပေါင်း ၂၅၀၀၀၀ အနက် ဆေးကုသမှုခံယူနိုင်သော လူနာပေါင်းမှာ ၁၅၀၀၀ ခန့် သာ ရှိပါတယ် ။အစိုးရ မဟုတ်သော အဖွဲ့ အစည်း NGO အကူအညီ ရရှိသူမှာ ၄၀၀၀ ခန့် သာ ရှိပါတယ် ။
ရောဂါကြောင့်သေဆုံးရသူ အရေအတွက် မှာ တနှစ်ထက်တနှစ် မြင့် မားလာရာ ယခုနှစ်တွင် ၂၅၀၀၀ ရှိမည်ဟု ခန့် မှန်းထားကြပါတယ် ။
အဆိုပါ ARV ဆေးတွဲတန်ဖိုး မှာ တလစာ ရောဂါပထမအဆင့် (၂၅,၀၀၀၊ ၃၀,၀၀၀) ကျပ်၊ ဒုတိယအဆင့် (၅၀,၀၀၀) ကျပ်ခန့်ရှိပြီး ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီ လေးငါးခုအပြင် ဆေးဆိုင် တိုင်း၌ လိုသမျှ ၀ယ်ယူရရှိနိုင် ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ ရောဂါဝေဒနာ ခံစားနေရသူ အများစုမှာ ဒီလို ဈေးကြီးသော ဆေးများကို ဝယ်ယူသုံးစွဲ ဖို့ မတတ်နိုင်ကြ တဲ့အတွက် ရောဂါ ဆိုးကို အရှုံးပေးကာ အသက်ဆုံးရှုံး ရသူပေါင်း မနဲလှပါ ။
အဲဒါတွေက တော့ ခု လောလောဆယ် မြန်မာပြည်မှာ ရင်ဆိုင် နေရတဲ့ ရောဂါ အခြေအနေ ၊ ကုသရေးအခက်အခဲ တွေနဲ့ ရောဂါသည်တို့ ရဲ့လျှစ်လျှု ရှု ခံစား နေရတဲ့အကြောင်းများ ထဲ က တစိတ်တဒေသပါ။
ဒီအကြောင်းတွေ ကို ပြောမယ်ဆိုရင် သူ မ အကြောင်းကို ချန်လှပ်ထားလို့ မရ နိုင်ပါဘူး ။
အေအိုင်ဒီအက်စ် ဝေဒနာသည်များကို ကူညီစောင့်ရှောက်သူအဖြစ် ထင်ရှားတဲ့ မဖြူဖြူသင်းဟာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၊ လူငယ်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များနှင့်အတူ အေအိုင်ဒီအက်စ်ရောဂါ ကာကွယ်တိုက်ဖျက်ရေး၊ ပညာပေးရေးလုပ်ငန်းများကို ၂၀၀၂ ခုနှစ်မှစပြီး တစိုက်မတ်မတ် လုပ်ကိုင်နေသူ ဖြစ်ပါတယ် ။ ရ နှစ်အတွင်း လူနာပေါင်း ၁၈၀၀ ကျော်ကို ကူညီခဲ့ တဲ့ မဖြူဖြူသင်း ဟာ ၂၀၀၀ ခုနှစ်က ဒေါ် အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲ ခရီးစဉ်ကို လိုက်သွားတာရင်းနဲ့ဦးဆုံး အကြိမ် အဖမ်း ခံရပြီး ထောင်ထဲရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ သူသွားမြင်လိုက်ရာမှ စိတ်ထဲမှာ တော်တော်ခံပြင်းသွားပြီး အဲ့ဒီထောင်ထဲမှာ တင် သူမ နိုင်ငံရေးဆက်လုပ်မယ် ဆိုတဲ့ အဲ့ဒီလိုမျိုးစိတ်ဓါတ်ကို ချခဲ့တယ်။ လေးလကျော်ထောင်ကျပြီးပြန်ထွက်လာပြီး ကတည်းက အေအိုင်ဒီအက်စ် ဝေဒနာသည်များကို ကူညီစောင့်ရှောက် တဲ့လုပ်ငန်းကို စပြီးလုပ်လာခဲ့ ပါတယ်။
အန်အယ်ဒီပါတီက ဖွင့်လှစ်ပို့ချတဲ့ HIV/AIDS ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးသင်တန်းတွေ UNDB ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအစီအစဉ်တွေက ဖွင့်လှစ်တဲ့သင်တန်းတွေကို တက်ရောက် ခဲ့ပြီးတော့ တစိုက်မတ်မတ် စေတနာ့ဝန်ထမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရောဂါ ကြွမ်း နေတဲ့ လူနာတွေ ကို မရွံမရှာ ကိုယ်ဖိရင်ဖိ ပြုစု စောင့်ရှောက်ပေး တဲ့ အတွက် လူနာတွေရဲ့ အားကိုးခြင်း ကို ခံခဲ့ ရတယ် ၊ တချို့ လူနာတွေ ဆို သူမ ကိုတွေ့ တာနဲ့တင် ရောဂါ တဝက်လောက် သက်သာ တယ်လို့ ပြောဆို ကြပါတယ်။
သူမ ဟာ ၂၀၀၇ ခုနှစ် မတ်လက Czech သမ္မတနိုင်ငံ၊ People in Need ဖောင်ဒေးရှင်းက ပေးအပ်သော Homo Homini ဆုကို ချီးမြှင့်ခံရခဲ့ရပါတယ်။ မြန်မာပြည်နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားမှုထဲမှ ထင်ရှားသည့် အမျိုးသမီးများဖြစ်ကြတဲ့ မစုစုနွေး၊ မနီလာသိန်းတို့နှင့်အတူ ပူးတွဲချီးမြှင့်ခံရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ထိုဆုမှာ ဒီမိုကရေစီနှင့် လူ့အခွင့်အရေးလုပ်ငန်းများမှာ စွမ်းစွမ်းတမံဆောင်ရွက်သူတွေ ၊ နိုင်ငံရေး ပဋိပက္ခများတွင် အကြမ်းမဖက်သည့်နည်းဖြင့် လှုပ်ရှားသူတွေ ကို ပေးအပ်သည့်ဆုဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဆု ကို ချီးမြှင့်ခံရကြောင်း သိရတော့ သူ ပြောခဲ့တဲ့ စကားလေးများက ဒီလိုပါ ။ ..
“ ဒီဆုကို ပေးလိုက်တယ် ဆိုကတည်းကလေ ကျမတို့ မြန်မာပြည်မှာ လူ့အခွင့်အရေးရော၊ ဒီမိုကရေစီအရေးရော ဆုံးရှုံး နေတာ ဆိုတာပေါ့နော်၊ ဟိုး ရှေး တော်တော်ကြာကြာကတည်းက ကျမတို့ ကြိုးစား လာခဲ့ကြတာပေါ့နော်၊ လွတ်လပ်ရေးအတွက်ရော၊ ဒီမိုကရေစီအတွက်ပေါ့နော်၊ အဲဒီအတွက်ကို၊ ကြိုးပမ်းလာတဲ့ လူတွေအတွက်ကို ရည်စူးပြီးတော့ ပေးတယ်လို့ ကျမ ခံယူတယ် လေ၊ အခု(၃)ယောက်ကို ပေးတယ်ပေါ့လေ၊ ဒီ(၃)ယောက်ကို ပေးတယ်လို့လည်း ကျမ မခံယူဘူး၊ အဓိကကတော့ ဒီစက်တင်ဘာမှာ ဖြစ်သွားတဲ့ ကိစ္စပေါ့နော်၊ ဒီမိုကရေစီရေးရယ်၊ လူ့အခွင့်အရေး ရယ်၊ လွတ်လပ်ရေးအတွက်ကို ရဟန်း သံဃာတွေရော ၊ ကျောင်းသား ပြည်သူလူထုတွေရော သူတို့ အသက်စွန့်ပြီး ကြိုးပမ်းခဲ့ကြတယ်၊ အဲလို လူတွေ အားလုံးအတွက်၊ ရဟန်းသံဃာတွေ၊ အဖမ်းဆီး နှိပ်စက်ခံပြီး လုပ်ထားသူတွေ အတွက် ရည်ရွယ် ပြီးပေးတာလို့လည်း ကျမအနေနဲ့ ခံယူတယ်လေ၊”
ဒီအမျိုးသမီး(၃)ဦးစလုံးရဲ့ ကိုယ်စား ရရှိခဲ့ဆုကိုတော့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်းက နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသူဟောင်း မလဲ့လဲ့နွယ်ကနေ သွားရောက် ရယူ ခဲ့ ပါတယ်၊ ဒီဆုဟာ (၂၀၀၀)ခုနှစ်က ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင်ကို ပေးအပ်ခဲ့တဲ့ ဆုလည်း ဖြစ်ပါတယ်၊ ဒီဆုဟာ ဒီမိုကရေစီနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးအတွက် ဆောင်ရွက်နေသူတွေ။ နိုင်ငံရေး ပဋိပက္ခတွေမှာ တစိုက်မတ်မတ် ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနေသူတွေကို ချီးမြှင့်တဲ့ ဆုလည်းဖြစ်ပါတယ်။
သူမ ဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ လွတ်မြောက်ရေးအတွက် ၀တ်ပြုဆုတောင်းပွဲ များကို ဦးဆောင်ပြုလုပ်သောကြောင့် ၂၀၀၇ ခု မေလ ၂၁ ရက်က အာဏာပိုင်များ၏ ဖမ်းဆီးမှုကို ထပ်မံ ခံခဲ့ရပါတယ် ။
သူမ မှာ ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါ ရှိနေပေမဲ့ သူ့ ကျန်းမာရေး ကိုတောင် အလေးမထားဘဲ ထောင်ထဲမှာ အစာ ငတ်ခံ ဆန္ဒပြ ခဲ့ ပါသေးတယ် ။
အဲဒီနောက် ပြန်လွတ်လာပြီး စေတနာ့ဝန်ထမ်း အလုပ်တွေကို အားကြိုးမန်တက် ဆက်လက် လုပ်ကိုင် နေခဲ့ပါတယ် ။
ဒီလိုနဲ့ ၂၀၀၇ သြဂုတ်လအတွင်း နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုများတွင် ပါဝင်သော ထင်ရှားသည့် လူငယ်များ ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရချိန်မှစပြီး အခြေအနေ အရ လူမြင်ကွင်းမှ ပျောက်ကွယ်အောင် တိမ်းရှောင် နေထိုင် ခဲ့ ရပါတယ် ။
ဤအချိန်အတွင်း သူ၏လူနာအချို့တည်းခိုနေထိုင်သည့် ရန်ကုန်မှ မဂ္ဂင်ကျောင်းတိုက် ချိတ်ပိတ်ခံခဲ့ရပြီး၊ ဖခင်ဖြစ်သူလည်း ရုတ်တရက် ကွယ်လွန်ခဲ့ ရ ပါတယ် ။
ဤသို့အများအကျိုး ၊ အေအိုင်ဒီအက်စ် ရောဂါ သည်များ အား ကိုယ်ထိလက်ရောက် ပြုစု စောင့်ရှောက်ပေးခဲ့သူ
မဖြူဖြူသင်းကိုယ်တိုင် ရေးသားခဲ့သော အောက်ပါ ကဗျာလေးကို ( ဖြူဖြူသင်းဘလော့ဂ် မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်)
ကြားမယ်ထင်တယ် အဖေ …။ ။
(့ ဖြူဖြူသင်း )
သူမလို လူများ အမြောက်အများ ပေါ်ထွက် ပြီး မြန်မာ ပြည်သားတွေရဲ့ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု ကို ပံ့ ပိုး ပေးနိုင်ကြပ်ါစေ ။
အာဏာရှင် စစ်အစိုးရ အမြန်ဆုံး ကျဆုံး ပါစေ ။
သွေးမြေကျ ရသော အဖြစ်ဆိုးများ နောင် ခေတ် အဆက်ဆက်မှာ မရှိ ပါရစေနဲ့။
အောက်ပါ နေရာများမှ အချက်အလက်များ ကိုးကား ပြီး ရေးသားဖေါ်ပြ အပ်ပါတယ် ။
မှတ်မှတ်ရရ | edit post
July 7, 2009 2:23 AM
ဟုတ်တယ် ကိုယ့်ဖခင်နေမကောင်းလို့တောင် ဆေးရုံမှာလာကြည့်ခွင့်မရအောင် ဂူဝမှာ မြေခွေးတွေ ဝိုင်းစောင့်နေကြတယ်
July 7, 2009 4:06 AM
July 7, 2009 4:59 AM
ဒီမှာကြည့်လေဗျာ ပြည်သူကို ချစ်တယ်ဆိုတာ ငွေမလို အာဏာ မ မက် ပေးချင်တာက အသက် ... ဒါတွေကို ခေါင်းဆောင်လို့ ခေါ်တယ်ဗျ ... ဤနေ၇ာကနေ မဖြူဖြူ သင်းကို ဂါရ၀ ပြုလိုက်ပါတယ်..
သူကတော့ အာဏာရှင်ကို ဆန့်ကျင်ခဲ့တဲ့ မေတ္တာရှင်မလေးပဲ။
“ထောင်ထဲရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ သူသွားမြင်လိုက်ရာမှ စိတ်ထဲမှာ တော်တော်ခံပြင်းသွားပြီး အဲ့ဒီထောင်ထဲမှာ တင် သူမ နိုင်ငံရေးဆက်လုပ်မယ် ဆိုတဲ့ အဲ့ဒီလိုမျိုးစိတ်ဓါတ်ကို ချခဲ့တယ်” တဲ့။
ထောင်ထဲရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာ တချို့က ကြောက်သွားတယ်၊ တချို့က ငြိမ်သွားတယ်၊ တချို့က ပိုရဲလာတယ်။ မဖြူဖြူသင်းကတော့ လေးစား အားထားရတဲ့ ပြည့်သူ့ သမီးကောင်းပါပဲ။
မမ ရေ...မဖြူဖြူသင်း ကိုသတင်းကြားထဲက လေးစား ချစ်ခင်နေခဲ့တာပါ..သူဘလော့လေး ရှိမှန်းမသိဘူး..ကျေးဇူး အထူးတင်ပါတယ်ရှင်..။ သူတို့လို လူဖြစ်ချင်ပါတယ်..။
သူရဲကောင်းတွေဆိုတာ ... အာဏာရှင်ကို ဘယ်တော့မှ ဒူးမထောက် .. ထောင်ဆိုတာ ရဲဝံ့သူတို့အတွက်တော့ သံမဏိဖြစ်စေတဲ့ ပန်းပဲဖိုပေါ့....
July 8, 2009 12:50 AM
ဦးညွှတ်ပါတယ် အမှန်တရားချစ်သူ သတ္တိရှင်အပေါင်း။
ဖတ်ရတာ စိတ်မကောင်းဘူး ဖွားကိရယ် ဂနေ့ တနေ့လုံး လူလဲ သိပ်စိတ်မကြည်ဘူးရယ် သက်ပြင်းပဲ ခဏ ခဏ ချနေရတယ် လူလဲ ကြာရင် မြန်မြန် အသက်တိုတော့မယ် ထင်ပါရဲ့ကွယ် ဟင်းးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး
ဖတ်ရတာစိတ်မကောင်းလိုက်တာ ..း(